Msombuluko 8 Mashi 2021
Ideski Ideski le-Duoo yisifiso sokuveza umlingiswa ngokusebenzisa i-minimalism yamafomu. Imigqa yayo emincane evundlile nemilenze yensimbi ebunjiwe yakha isithombe esinamandla sokubuka. Ishelufu elingaphezulu likuvumela ukuthi ubeke izinto zokubhala ukuze zingaphazamisi ngenkathi usebenza. I-tray efihlekile ngaphezulu yamadivayisi wokuxhuma igcina i-aesthetics ehlanzekile. Isihla setafula esenziwe nge-veneer yemvelo sithwala imfudumalo yokuthungwa kwemvelo kwezinkuni. Ideski ligcina ibhalansi engenakufinyeleleka, sibonga izinto ezikhethiwe ngokuvumelanayo, ukusebenza kanye nokusebenza kahle okuhlanganiswa nama-aesthetics amafomu ajwayelekile nalawo aqinile.
Umshini We-Pasta Owenziwe Ekhaya
Sonto 7 Mashi 2021
Umshini We-Pasta Owenziwe Ekhaya I-Hidro Mama Mia iyinhlangano yokutakulwa kwezenhlalo-namasiko ngokusebenzisa i-gastronomy yase-Italy. Kulula ukuyisebenzisa, ilula futhi icompact, kulula ukuyigcina nokuyithutha. Ivumela ukukhiqizwa okuphezulu okuphephile, kuhlinzeka ngesipiliyoni esimnandi sokupheka emndenini empilweni yansuku zonke nokuxhumana kwabangane. Injini ihlanganiswe ngokuphelele kusethi yokudlulisela, enikeza amandla, amandla nokusebenzisa okuphephile, ihlinzeka nokuhlanza okulula nokusekelwa. Inquma inhlama ngobukhulu obuhlukile, ikwazi ukulungiselela izitsha ezahlukahlukene: i-pasta, ama-noodle, i-lasagna, isinkwa, i-khekhe, i-pizza nokuningi.
I-Hypercar Ngezikhathi zobuchwepheshe obusezingeni eliphakeme wonke amagajethi wedijithali, ubushelelezi bezikrini zokuthinta nezimoto ezinengqondo zevolumu eyodwa, iphrojekthi yeBrescia Hommage iyisifundo sakudala sokuklanywa kwabafundi abangamaphasi amabili abacatshangelwe njengokugubha inkathi lapho kube lula khona, ukuthinta izinto ezibonakalayo, amandla aluhlaza, ubuhle obumsulwa kanye nokuxhumana okuqondile phakathi komuntu nomshini kwakuyizimiso zomdlalo. Isikhathi lapho amadoda anesibindi futhi ngobuhlakani njengo-Ettore Bugatti ngokwakhe enza amadivayisi eselula omangaza umhlaba.
Lwesihlanu 5 Mashi 2021
Amachibi Okubhukuda I-Termalija Family Wellness yamuva kakhulu ochungechungeni lwamaphrojekthi u-Enota awakhile eThemu Olimia eminyakeni eyishumi nanhlanu edlule futhi uphetha ukuguqulwa okuphelele kwenkimbinkimbi ye-spa. Uma ubuka kude, ukwakheka, umbala, nesilinganiso sesakhiwo esisha esididiyelwe samathamo e-tetrahedral kuyinto yokuqhubeka kwesigcawu sezakhiwo zasemakhaya ezizungezile, ngokokubona okufika enhliziyweni ye-tata. Uphahla olusha lusebenza njengesithunzi esikhulu sasehlobo futhi aluthathi noma yisiphi isikhala sangaphandle esiyigugu.
Umshini We-Juicer Othomathikhi
Umshini We-Juicer Othomathikhi I-Toromac yakhelwe ngokukhethekile ngokubukeka kwayo okunamandla ukuletha indlela entsha yokudla ujusi we-orange osanda kufakwa. Yenzelwe ukukhishwa kwejusi ephezulu, yenzelwe izindawo zokudlela, izitolo zokudlela ezinkulu kanye nezitolo ezinkulu kanye nomklamo wayo we-premium uvumela okuhlangenwe nakho okunobungani okuletha ukunambitheka, impilo kanye nenhlanzeko. Inohlelo olusha olusika izithelo ngokuthe nkqo futhi lugxobhoza ama-halves ngokucindezela okujikelezayo. Lokhu kusho ukuthi ukusebenza okuphezulu kutholakala ngaphandle kokuncipha noma ukuthinta igobolondo.
Lwesithathu 3 Mashi 2021
Ilebula Likabhiya Idizayini yokulebula ubhiya ngesitayela se-Art Nouveau. Ilebula likabhiya liqukethe imininingwane eminingi ngenqubo yokwenza. Lo mklamo uhambisana namabhodlela amabili ahlukene. Lokhu kungenziwa ngokumane kuprinte umklamo kusibonisi samaphesenti ayi-100 nosayizi wamaphesenti angama-70. Ilebula ixhumeke kudathabhethi, eqinisekisa ukuthi ibhodlela ngalinye lithola inombolo ehlukile yokugcwalisa.
Ideski Umshini We-Pasta Owenziwe Ekhaya I-Hypercar Amachibi Okubhukuda Umshini We-Juicer Othomathikhi Ilebula Likabhiya